Bitgert मूल्य स्काइरोकेटिङ, जबकि सोलाना डुब्छ - Bitgert अर्को सोलाना हुन सक्छ? - Shiv's Era
Bitgert मूल्य स्काइरोकेटिङ, जबकि सोलाना डुब्छ – Bitgert अर्को सोलाना हुन सक्छ?
बिटगर्टलाई अर्को सोलाना भनिन्छ
सोलाना भन्दा उच्च TPS
लगानीकर्ताहरूको लागि उच्च आकर्षक परियोजना
सोलाना को पतन
शीर्ष बिटकोइन ट्रेडिंग प्लेटफर्महरू आँखामा राख्नको लागि
फेब्रुअरीको चौथो हप्ता धेरै ठूला क्रिप्टोकरेन्सीहरू डुब्दै, एक मंदीको अवस्थामा सुरु भयो। Bitcoin पहिले नै $ 40k भन्दा तल व्यापार गरिरहेको छ, जुन मूल्य हो जुन धेरै लगानीकर्ताहरूले सोचेका थिए कि उनीहरूले 2022 मा फेरि कहिल्यै नदेख्नेछन्। सोलानाले7दिनमा 18% र गत 24 घण्टामा 12% ले यो लेखेको छ। तर, बिटगर्टको मूल्य एक सातादेखि निरन्तर उकालो लागिरहेको छ ।
BitGert BRISE BRC20 पछिल्लो ब्लकचेन हो
Bitgert BRISE BRC20 ब्लकचेन आज क्रिप्टो उद्योगको इतिहासमा सबैभन्दा शक्तिशाली चेनहरू मध्ये एक हो। ग्यासको लागत $0.000000001 मा राखेर महँगो ग्यास शुल्कको मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने यो पहिलो ब्लकचेन हो, जुन मूलतः शून्य शुल्क हो। ग्यासरहित सुविधाको अतिरिक्त, चेन हाल उद्योगमा सबैभन्दा छिटो चेन हो।
Centcex परियोजना: ‘आधारभूत आयको लागि इथरियम’ कस्तो देखिन्छ
Centcex परियोजनाको वृद्धि दर, यो लगभग तीन महिनाको लागि, प्रभावशाली छ। यो किनभने टोलीसँग दीर्घकालीन लाभहरू खोज्ने प्रत्येक क्रिप्टो लगानीकर्ताको लागि अत्यधिक आकर्षक परियोजना छ। centcex टोकन धारकहरूको लागि लाभ, विशेष गरी स्टक टोकनहरू, केही महिना वा वर्षहरूमा ठूलो हुनेछ।
सोलानाको मूल्य7दिनमा 18% घट्यो, बिटगर्ट चेन अब सस्तो ग्यासको साथ छिटो
सोलाना मूल्य हालको मन्दी बजार अवस्था द्वारा सबैभन्दा हिट क्रिप्टो सिक्का मध्ये एक भएको छ। सोलाना सिक्का विगत सात दिनमा १८ प्रतिशतले घटेको थियो । Bitgert चेन अब छिटो छ र सस्तो ग्यास छ।